Inqaku leRedmi 7 lisungulwe ngokusemthethweni eSpain | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uXiaomi wabhengeza ukuba babenomnyadala wokubonisa owawulungiselelwe eMadrid ngo-Matshi 6. Uphawu lwesiTshayina alukhange lutsho ukuba yeyiphi ifowuni eza kuboniswa kuyo, nangona kwipowusta unokubona u-7. Ke ngoko, abaninzi babecinga ukuba izakuba yile Ukunikezelwa kwamazwe ngamazwe kwiRedmi Qaphela 7, eyayiziswe eTshayina ngoJanuwari.
Okokugqibela, oku kuqikelela kuyinyani, kuba uphawu luququzelele umsitho yazisa ngale Redmi Qaphela 7 kwintengiso yaseSpain. Sele siyazi ukuba olu luhlu luphakathi lwentengiso luya kuphehlelelwa eSpain, ifowuni enayo yonke into eza kuphumelela kweli candelo. E-China sele iyimpumelelo ukuza kuthi ga ngoku.
Sifumana iinguqulelo ezintathu zizonke kolu luhlu luphakathi, oluza kuthengiswa eSpain. Nangona umhla wokukhutshwa nganye yeenguqulelo zeRedmi Qaphela i-7 iya kwahluka, kunye nexabiso layo. Kodwa i-brand sele yabelane ngolwazi kunye nabasebenzisi.
Eyokuqala yinguqulelo ye-3/32 GB eya kuthi ikhutshwe nge-Matshi 14 ngexabiso le-149 euro. Kwelinye icala, sikwafumana enye inguqulelo yeRedmi Qaphela i-7 ene-4/64 GB eza kuqaliswa ngoMatshi 21, Kwimeko yakho ngexabiso lama-euro angama-199.
Ngelixa sinenguqulo yesithathu yoluhlu oluphakathi, lolona lufika nge-4/128 GB. Ukuze ukwazi ukuthenga oku kuya kufuneka ulinde ithutyana, kuba izakwaziswa ngokusesikweni ngo-Epreli 1 eSpain. Kwimeko yakho, iyenza ngexabiso lama-euro angama-249, eyona ibiza kakhulu kunazo zonke, njengoko bekulindelekile.
Ke ngoko, abasebenzisi baseSpain banomdla kule Redmi Qaphela 7 sele uyazi ukuba ungalulindela nini olu luhlu luphakathi kwintengiso, kuhlobo ngalunye lwayo. Iya kuba nakho ukuyithenga kwiivenkile zorhwebo, ukongeza kwezinye iindawo zentengiso ezinje ngeAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi's Redmi Qaphela 7 ifika ngokusemthethweni eSpain
Dlala njengomqhubi weqela lebhokisi yomntu kwi-Incredibox emangalisayo